Kusevenza tafura Vagadziri & vanotengesa - China Kurovera tafura fekitori
Imba Accents Indoor Kushongedza Tafura
Ruvara: Aqua Yakajeka / Ultra Yakajeka / Bhuruu / Girinhi / Grey / Tea / Kupenda / Kudhinda
Imba Furniture Kurutivi Tafura ineGirazi yepamusoro
Luxury SS uye girazi maAccent Tafura
Yakajairika tafura yetii inowanzo kuve yakakamurwa kuita mativi uye kutenderera, kukwirira kwakaenzana nesofa, saizi iri hombe, inowanzoiswa kumberi kwesofa mumba yekutandarira, inonyanya kuita basa rekuisa tii makapu nemidziyo yetii, makapu ewaini, michero, ashtray, maruva zvigadzirwa, nezvimwe.
12, Round Accent Tafura Yakajeka Girazi yepamusoro / Nhema Base
Rondedzero Chiumbwa chesimbi chakavezwa chinosimudza chisimbi chegirazi chakakora uye chakaremara sedombo rechando, ichikoka mwenje kuti upfuure nepakati uye nekukwirisa pamusoro payo, uchichishandura zuva rese. Yakagadzirwa kune zvakatemerwa maratidziro egirazi tenzi, tafura yega yega ibasa reunyanzvi uye inosimbisa maitiro egirazi rakagadzirwa nehunyanzvi hunyanzvi. Iyo yakasviba girazi rakaumbwa inoita kuti chisikwa chimwe nechimwe chisarudzika chimwe cherudzi. Chigadziko-chesimbi chesimbi chakaiswa nesirabhu yekukanda girazi pane t ...
12, ROUND ACCENTED TABLE AMBER Girazi TOP
Chigadziko-chesimbi chesimbi chakavezwa nesirabhu yekukanda girazi paAccent Tafura. Ruoko rwakadururwa muforoma, yega yega girazi yepamusoro inoratidza misiyano inoita iyo yemhando.
Yakagadzirwa nemaoko esimbi yakagadzirwa nesimbi yekukanda girazi pamusoro.
Girazi yepamusoro inopihwa mumaviri mavara: akajeka, amber.
Base inoratidzira poda yakavharwa nhema, ndarira, kana bronze kupera.
Akanzwa mapads pazasi pechigadziko chekuchengetedza nzvimbo.
Mabhonzo emhepo, mamaki anotenderera, isina kuenzana pamusoro uye kumicheto, kusiana pakukura, ukobvu, kujekesa uye ruvara zvese zviri zvechiitiko zveichi chiitiko uye zvinowedzera kuhunhu hwayo.
Aya mahwendefa egirazi akasarudzika akapetwa neyakagadzika trododesi base inova yemazuva ano tweak kune mazana emakore echinyakare - ruoko-rakagadzirwa simbi.